Banco Santander သည် Apple Pay UK ၌ဆင်းသက်ခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple Pay ကို, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, iPhone ကို, NOTICIAS
Apple Pay ကို ယူကေတွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဂျော်ဒီကသူသည်၎င်းအားတရားဝင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင်ဇူလိုင်လ 14သို့သော်အချို့ဘဏ်များသည်ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုနောက်တစ်ကြိမ်စတင်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်သည် သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကဒ်များကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည် Apple Pay နှင့်အသုံးပြုရန် ဆက်မလုပ်မီပုံ၏အရည်အသွေးအတွက်တောင်းပန်ပါ၊ အရည်အသွေးမပိုပါ။
အချို့သော Banco Santander ဖောက်သည်များအချို့ဖိုရမ်များတွင်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည် သူတို့ရဲ့ Passbook ကတ်များကိုအောင်မြင်စွာထည့်ပြီးပါပြီ Apple Pay နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက် iPhone နှင့် Apple Watch နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကဒ်များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အ ၎င်းတို့၏ကတ်ပြားကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောဖောက်သည်များ သူတို့လည်းဖြစ်ကြသည် Santander မှအတည်ပြုအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိသည်သူတို့အခု Apple Pay ကိုသုံးနိုင်ပြီဆိုတာကိုအသိပေးလိုက်တယ်။ Apple Pay နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သူ၏ကဒ်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့သော Santander ၏ဖောက်သည်များထဲမှတစ် ဦး တစ် ဦး ဝယ်ယူစေရန် McDonalds မှာသုံးနိုင်သည်.
Banco Santander ကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် United Kingdom မှသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုများအတွက်ဒေသထိုအခါ ကဒ်ထည့်ပါနှင့်နောက်ပိုင်း သင်၏ဒေသကိုယူကေသို့ပြောင်းပါ။ ဒါကဘဏ်တွေရဲ့လက္ခဏာပဲ မကြာခင်မှာပဲ Apple Pay ကိုလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်.
Apple Pay ကိုဗြိတိန်တွင်တရားဝင်ရောင်းချခွင့်ပြုမည့်အချိန်အတိအကျကိုမသိရသေးသော်လည်း Worldwide Developers Conference တွင် ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုဇူလိုင်လမှာစတင်မယ်လို့ Apple ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်, နှင့်သင်ဤဆောင်းပါး၏အစမှာသင်ထားသကဲ့သို့, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေ့ဖြစ်လိမ့်မည် ဗြိတိန်တွင်ဇူလိုင်လ 14.
လတ်တလောတွင် Banco Santander သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကဒ်များကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိလျက်ရှိသည် သူတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသိပေးအီးမေးလ်ဖြင့် Apple Pay ကိုအသုံးပြုရန်မရနိုင်တော့ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအနည်းဆုံးဇူလိုင်လ 14 သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple Pay ကို » Banco Santander သည် Apple Pay တွင်သာမကဗြိတိန်တွင်ပါ ၀ င်သည်